Booliska oo faah faahiyay sababtii Cabdiweli Muudeey loogu diiday in uu aado Baraawe. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Booliska oo faah faahiyay sababtii Cabdiweli Muudeey loogu diiday in uu aado Baraawe.
Booliska oo faah faahiyay sababtii Cabdiweli Muudeey loogu diiday in uu aado Baraawe.
written by warsan radio 14/02/2022
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa faah faahin guud ka bixiyay sababtii Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Cabduweli Ibraahim Muudeey loogu diiday in uu tago degmada Baraawe, isaga oo markale u sharraxan kursiga Xildhibaan ee uu ku fadhiyo.
Afhayeenka oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho wuxuu sheegay in Cabdiweli Muudeey aan asiga loo diidin in uu aado degmada Baraawe, balse laga hor istaagay Ciidan farabadan iyo hub culus uu u watay Magaalada Baraawe oo ah halka ay doorashada xildhibaanada golaha Shacabka ka socoto.
Waxa uu sheegay in Amniga degmada Baraawe uu yahay mid sugan oo Ciidankii ugu badnaa ee sugaya amniga lageeyay haatana aysan u baahneyn in Ciidan farabadan lala tago.
Waxa uu Afhayeenka hadalkiisabuu intaasi ku daray in Cabduweli Muudeey loo ogolaaday in uu wato ilaaladiisa gaar ah oo gaaraya ilaa 5 askari maadaama Baraawe amnigeeda si wayn ay u sugayaan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan wuxuu sheefay in musharixiinta aadeysa doorashada kuraasta golaha shacabka loo ogolyahay ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraya 4 ilaa 5 laakin waxii ka badan aysan aqbali doonin in uu wato saanad malatarina qaataan.
Warkaan kasoo baxay Booliska Soomaaliya ayaa kusoo beegmay xilli shalay Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudeey loo diiday in uu tago degmada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ka socoto doorashada Golaha Shacabka.
Booliska oo faah faahiyay sababtii Cabdiweli Muudeey loogu diiday in uu aado Baraawe. was last modified: February 14th, 2022 by warsan radio
Siyaasi katirsanaa nidaamkii Al-Bashiir oo la xiray
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo loo doortay Xildhibaan Golaha Shacabka
Donald Yamamoto oo si kulul ula hadlayay dowladda Federaalka iyo Mucaaradka
SAWIRO: Jaaliyadda Konfur Galbeed ee Dalka Sacudiga oo kullan Soo Dhaweyn Ah u Sameysay…
Golaha ammaanka oo ku boorriyay hoggaamiyeyaasha is haya ee Soomaaliya inay xalliyaan khilaafkooda